मा सुन्दर र रहस्यमय छुट्टी लिनुअघि कि दिन - नयाँ वर्ष, सबै घरहरू विशेष वातावरण, ताजा पाइन र सुन्तले रङ को गन्ध छ। र बच्चाहरु रमाइलो र उपयोगी संग समय खर्च गर्न, तिनीहरूले रोचक र रमाइलो गर्न, त्यसो गर्न केही गर्न आवश्यक छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प - यो क्रिसमस शिल्प बनाउन स्क्रैप सामाग्री देखि बच्चाहरु को लागि सुरु गर्न छ। अक्सर, को सूत्रहरू रंग कागज, गत्ता, बटन, र यति मा, त्यसैले हुन्छन्। यसलाई निगरानी र यस प्रक्रियामा बच्चा मार्गदर्शन गर्न, र त्यसपछि आत्म-बनाएको नयाँ वर्षको खिलौने अद्वितीय र inimitable हुनेछ मात्र महत्त्वपूर्ण छ।
सबैभन्दा सरल छोराछोरीको क्रिसमस शिल्प - एक हिमपात, कागज काट्न। तिनीहरूले विभिन्न आकार र आकार हुन सक्छ, र अतिरिक्त कोठा र अपार्टमेन्ट को रूप मा क्रिसमस सजावट र गहने दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ। अक्सर विन्डो गर्न चिपके snowflakes, तर यदि यस्तो Hack गत्ता समाधान गर्न, यो एक क्रिसमस रूख वा पाइन सजाने सुरक्षित सम्भव छ। यस्तो हिमपात सुन्दर र आकर्षक देख्यो लागि, बच्चा उनको सेक्विन मा राख्न मौका प्रदान गर्नुहोस्।
बच्चाहरु को लागि धेरै लोकप्रिय क्रिसमस शिल्प - हरियो कागज वा गत्ता देखि एक मिनी-क्रिसमस ट्री। तिनीहरूले शंकु को रूप मा गरे र टेप वा गोंद संग सुरक्षित छन्। एक बच्चा जस्तै आफ्नो स्वाद, यसको फरक रंग वा अन्य रंग गर्न फँस कागज संग चित्रित गर्न क्रिसमस ट्री सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। यी क्रिसमस गहने को मुद्दा संलग्न imperative हो, त्यसैले यसलाई पूर्व-किन्न मात्र skein चमकदार वा multicolored क्रिसमस सजावट को उत्पादन गर्न यार्न कुनै पनि बच्चाको लागि थप रोचक र रोमाञ्चक अनुभव भयो लागि मनमोहक छ।
उपहार स्वतन्त्र उत्पादन - नातेदार र साथीहरूलाई उपहार दिन आफ्नो बच्चाहरु सिकाउन ठूलो तरिका हो। आफ्नो साथी र भाइ बहिनी बच्चा क्रिसमस बनाउन सक्छ कागज बाहिर शिल्प बच्चाहरु को लागि इच्छा, गत्ता एफआइआर संग लालटेन को रूप मा। वा मूल ओरिगेमी। बच्चाहरु को लागि उपहार क्रिसमस शिल्प को इच्छा र बधाई संग हस्ताक्षर उपस्थिति द्वारा सबै अरूबाट अलग हुनुपर्छ। बच्चा उहाँले मात्र उपहार नहीं बुझ्छ, तर पनि आफ्नो विचार स्पस्ट बोल्नु् गर्न दिनुहोस्।
आमाबाबुको लागि बच्चा बनाउन सक्छ घर कार्ड। यस्तो उपहार लागि ठूलो विचार - कार्ड बटन को एक आभूषण। गत्ता (यो गर्नुपर्छ मात्र एल्डरहरूको पर्यवेक्षण अन्तर्गत) बाक्लो र विश्वसनीय छ भने तिनीहरूले सी सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले भर्खरै पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वयस्क पनि राम्रो उदाहरण रूपमा बच्चाहरु को लागि एक समान क्रिसमस शिल्प निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।
ठूलो चासो संग कुनै पनि बच्चा रङलगाएकोकागज को क्रिसमस गारलैंड-चेन स्लाइस सङ्कलन गर्नेछ। यसलाई यदि फलस्वरूप यो त चिल्लो र सिद्ध छैन मामिला गर्दैन। मुख्य कुरा बच्चा यो jewel नै बनाएको छ कि छ, र यो क्रिसमस ट्री टुकडी एक योग्य साथै हुन सक्छ। लामो गारलैंड पूर्ण स्वरूपको र डिजाइन को एक किसिम मा गठन छत अन्तर्गत वा पर्खालहरु मा बच्चाहरु, साथै बच्चाहरुको लागि यस्तो क्रिसमस शिल्प मा राखिएको गर्न सकिन्छ।
कसरी आफ्नै हातले देश मा एक बच्चाको प्ले क्षेत्र बनाउने? विचार र सुझाव
को अगाडि सतह - बुनना गर्न थालेका छन् गर्नेहरूका लागि आधारभूत सीप
मोजाइक eggshells बनेको - यो सुशील स्टाइलिश, व्यावहारिक र आर्थिक छ!
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या र मात्र मास्टर जोकर पोशाक
कसरी सूर्य-स्कर्ट बाहिर कटौती गर्न? एक स्कर्ट polusolntse कसरी कटौती गर्ने?
इन्जिन तेल 5W40 अर्द्ध-सिंथेटिक्स: विनिर्देशों, समीक्षा
को जमानत को लगानी गुणस्तर। को जमानत बजार को अवधारणा। जमानत को मुख्य प्रकार।
तपाईं प्लम संग मासु कसरी पकाउन सक्छ
आफ्नै हातले हेलोवीन लागि शिल्प: को भित्री र उत्सव तालिका बाहिर बनाउन
दालचिनी संग चिया - दिन उत्तम सुरु!
रणनीतिक व्यवस्थापन: लक्ष्य को प्रकार